BEE: Wuo ma budata Email gị na-anabata Email n'ịntanetị N'efu | Martech Zone
Monday, March 8, 2021 Tuesday, August 17, 2021 Douglas Karr
Ihe karịrị 60% nke ozi ịntanetị niile mepere na ekwentị mkpanaaka dị ka Kọntaktị Kpọtụrụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya na ụfọdụ ụlọ ọrụ ka na-agbasi mbọ ike imepụta ozi ịntanetị. Enwere nsogbu 3 na email na-anabata:
Email na-eweta ọrụ - Ọtụtụ ndị na-enye email anaghị enwe ịdọrọ & dobe ike ụlọ email, yabụ ọ chọrọ ụda mmepe na ngalaba nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ndị otu mmepe iji wuo ndebiri ndị ahụ.
Ndị Ahịa Email - Ọbụghị ndị ahịa email niile bụ otu na ọtụtụ n’ime ha na-enye ozi ịntanetị dị iche na ndị ọzọ. N'ihi ya, ịnwale gafee ndị ahịa email na ngwaọrụ bụ ụlọ ọrụ na ya n'onwe ya.
Development - Ọ bụrụ na ịmara HTML na CSS, ị nwere ike iwulite ọmarịcha ihe na-eme ka ibe weebụ dị ụtọ… Ọ chọrọ ịrụ ọrụ na ndị mmepe ukwu, ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke ukwuu ndebiri ma gbanwee.
E nwere ọtụtụ ebe ịntanetị nwere ike ịchọta ma budata ndebiri email n'efu nke na-azaghachi nke ọma. Y’oburu n’ichoo ezigbo mmepe, inwere ike ighaputa ihe ndi n’ile ma weputara onwe gi ezigbo nma. Edezi raw koodu n'azụ email ka bụ bụghị fun, ezie… ichefu a ịke ma ọ bụ a na klas na gị email ga-ele anya dị egwu.
Anọ m na-achọ idekọ akwụkwọ akụkọ ahụ Martech Zone nwa oge ugbu a ma anyị nwere ọrụ email anyị nke na-agba ọsọ na sava anyị nke na-efu pennies na dollar ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-eweta. Karịa ndị debanyere aha 30,000, enweghị m ike ịkọwa mmefu nke ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email ka anyị wuru nke anyị!
BE KWES MobileR Email KWES EmailR Email Email Nrụpụta
Ka m na-enyocha ụfọdụ ndebiri gburugburu weebụ nke masịrị m, m mere n'ofe BEE, ụlọ ọrụ mepụtara ngwaọrụ ole na ole dị egwu:
BEE ngwa mgbakwunye - editọ editọ peeji nke email zuru ezu maka ụlọ ọrụ SaaS iji tinye n'ime nyiwe ha.
B Pro Pro - mmemme imewe email maka ndị na-emepụta email ọkachamara ka ha rụkọ ọrụ ma zụlite.
B FreeR Free N'efu -ọmarịcha onye na-anabata ozi na-anabata ekwentị mkpanaaka nke ị nwere ike zụlite ndebiri site na mbido ma ọ bụ bubata nke ọ bụla n'ime narị ndebiri ndebiri email na-anabata n'efu.
N'ime otu awa, enwere m ike wuo email m, tweak ya maka ngwaọrụ mkpanaka, zigara onwe m ule, wee budata koodu… niile n'efu!
Nke mbu, ahoputara m ndebiri ndebiri wee wuo ngalaba nke m choro ma tinye ihe onodu ebe a. Aga m etinye koodu a n'ime Martech Zone'' template ozugbo ọ bụ kpọmkwem ebe m chọrọ ya.
Enwetara m ozi email maka desktọọpụ wee mee obere mgbanwe maka spacing na padding.
Enyochare m na Mobile ma mee mgbanwe ụfọdụ ọzọ. Onye nchịkọta akụkọ ahụ na-enye ohere iji zoo ihe maka desktọọpụ ma ọ bụ mkpanaka, yabụ ị nwere ike ịhazi ahụmịhe mkpanaka ahụ nke ọma.
M zigara onwe m email ahụ kpọmkwem site na nchịkọta akụkọ BEE:
Onye nchịkọta akụkọ ahụ na - enyere gị aka inwe nzụlite nke na - adị mma ma ọ bụrụ na ị na - eji ya Ọchịchịrị na ọnọdụ na email gị ahịa.
Ozugbo ihe niile zuru oke, enwere m ike ibudata faịlụ HTML zuru oke yana onyonyo ọ bụla metụtara ya na interface ha. Ha nwere nhọrọ ole na ole n'oge a, n'agbanyeghị, ọ bụrụ na ị debanye aha maka akaụntụ BEE Pro akwụ ụgwọ.
BE le anya maka akwụkwọ akụkọ emelitere site na Martech Zone!
Bido Iwuli Email Na-azaghachi gị na BEE
Ngosipụta: Ana m eji nke anyị Njikọ njikọ BEE ke ibuotikọ emi.
Tags: nchịkọta email emailngwa mgbakwunye anua proụ proemail nchịkọta akụkọfree nchịkọta akụkọ emailnchịkọta akụkọ email n'ịntanetịeditọ email na-anabata